admin, Author at Cutis Care - Page2of 3
तालुपनाको स्थायी समाधान कपाल प्रत्यारोपण
टाउकाेमा कपाल नहुँदा आफ्नै शरीरको कपाल राखिने प्रक्रिया हो कपाल प्रत्यारोपण। पछिल्लो समय कपाल प्रत्यारोपण गर्ने फेसन जस्तै बनेको छ। यही फेसनका कारण गलत चिकित्सककोमा गएर प्रत्यारोपण गराउनेहरू भएको अलिअलि कपाल जाने मात्र होइन अनुहार नै कुरुप भएको गुनासा पनि आउने गरेका छन्। कपाल प्रत्यारोपण के हो र कसरी सही विशेषज्ञ छान्ने र कसले प्रत्यारोपण […]
कानमा ठुलो रिँग लगाउने फेशन- कानको लोती सिलाउनु
महिला एवम् पुरुषकोकानमा आकर्षणका लागि गरगहना लगाउनु साधारण कुरा हो । कानको लोतीमा अझ ठूलो प्वाल बनाएर Ring (रिँग) लगाउनु पनि फेसननै बनेको छ । तर समय अनुसार गरगहनाको भारले कानको लोती क्रमशः ठूलो हुदै जान्छ । ठूलोलोती बनाएको व्यक्तिहरुलाई पनि पछि त्यो फेसन मन नपर्ने हुन सक्छ । छाला रोग विशेषज्ञ सँग परामर्स गर्न […]
कपाल प्रत्यारोपन पछि दश वर्ष उमेर घटेको अनुभव : पहिले अङ्कल अहिले दार्इ
हाल म ४४ वर्षको भए । ३० वर्षको उमेर देखि कपाल झर्न थाले पछि म ३४ वर्षको उमेरमा पुरै तालु भए । म व्यापार गर्ने व्यक्ति हुँ तर, कपाल नहुँदा मलाई काममा धेरैनै आत्मविश्वास गुमाए । आफु भन्दा केही उमेर कान्छो मान्छेले अझ अङ्कल भन्दा त झनै अफ्ठ्यारो स्थिति हुन्थ्यो । रिस पनि उठ्थ्यो , […]
Why I becameadermatologist – Dr. Dharmendra Karn
अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको पानीले मेरो कपाल झर्यो : के हो सत्य ?
गएको हप्ता हामीले ३ विदेशमा बस्ने नेपालीको कपाल प्रत्यारोपण गर्यौ । तालुपना को उपचार मा धेरै नै खर्च गरिसक्नु भएको थियो उहाँहरुले। प्रत्यारोपण अगाडी हामीले सधैझैं प्रश्न गर्यौ, ‘’कसरी झर्यो जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कपाल?’’ हामी विदेश जाने बित्तिकै पानी परिवर्तन भयो, त्यहाँ को पानी सारैनै अप्राकृतिक भएकोले कपाल झरेको हुनुपर्छ भन्ने उत्तर दिनुभयो उहाँहरुले। समुन्द्रको […]
यसकारण ‘तालु खुइले’ बन्दैछन् नेपालीहरु
के तपाईं कपाल झर्ने समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? बिज्ञहरुका अनुसार यसको पनि आफ्नै कारण छ । तीव्र सहरीकरण, तनाव, प्रदुषण, नकारात्मक जीवनशैली, खानपानमा विषादी, उचित पोषणको अभाव, रसायनको अत्यधिक उपयोगका कारणले नेपालीहरु क्रमश ‘तालु खुइले’ स्थितिमा पुगिरहेका छन् । धुलिखेल अस्पताल, छाला रोग विभागद्वारा विदेशी विशेषज्ञको सहभागितामा आयोजित कपाल पुर्नरस्थापन सम्बन्धी कार्यशालामा विशेषज्ञहरुले उक्त कुरा औंल्याएका हुन् । उसो […]
तपाईं टाउको मुडुलो (कपाल/रौं रहित) भएकोमा चिन्तित हुनुहुन्छ ? नाङ्गो टाउकोले सौन्दर्यता विगारेकोमा हिनताबोध भइरहेको छ ? टाउकोभरी रौं उमार्न इच्छुक हुनुहुन्छ ? यदि यिनै विषयमा घोत्लिरहनु भएको छ भने तपाईंलाई खुसीको खबर छ । मुडुलो टाउकोभरि कपाल उमार्न विदेश धाइरहनु पर्दैन । विदेशमा गएर महंगो शुल्क तिर्नु पर्दैन । नेपालमै यस्ता चिकित्सक छन् जसले […]
कपाल प्रत्यारोपण खासमा एक किसिमको सीप हो- डा. धर्मेन्द्र कर्ण
काठमाडौं — हाम्रो मुलुकमा आधा दशकयता कपाल प्रत्यारोपणप्रतिको आकर्षण बढेको छ । कपाल प्रत्यारोपण राम्रैसँग भए त आफ्नो पनि आकर्षण पनि बढ्छ नै, तर त्यसमा कुनै तल–बितल भए परिणाम उल्टो हुन बेर लाग्दैन । कपाल उपयुक्त किसिमले नरोपिँदा उत्पन्न हुने समस्याका भुक्तभोगी पनि कम छैनन् । तिनैमध्येका एक हुन्– अनिल । लहैलहैमा लागेर कपाल प्रत्यारोपण गराउँदा निम्तिएको समस्या भोगिरहेका […]
Ghumne Mech with Dr Dharmendra Karna – 21 May 2016 || VIDEO
होली स्वास्थ्यको पनि ख्याल राखौं
छालामा होलीको रङहरुले कसरी प्रभाव पार्छ
हानिकारक रङबाट छाला बचाउने सौन्दर्य विशेषज्ञ डा‍. कर्णको सुझाव